Chinese inground light, n'okpuru na ije Ikanam ọkụ emeputa - Eurborn
Mgbidi ọkụ ML1021
Ntụpọ ọkụ PL021
Ihie ìhè PL023
Ntụpọ ọkụ PL026
Ihie ìhè PL608
Vidiyo maka ntinye na ọkụ ala ọkụ
Ọdịdị dị elu na ọkọlọtọ dị elu.
Eurborn bụ naanị onye nrụpụta China nke ewepụtara maka nyocha, mmepe na mmepụta nke igwe anaghị agba nchara dị n’èzí n’okpuru ala na ọkụ mmiri. N'adịghị ka ndị ọzọ na-eweta ngwaahịa nke na-eme ọtụtụ ụdị oriọna, anyị ga-elekwasị anya n'ihi ọnọdụ siri ike nke na-ama ngwaahịa anyị aka. Ngwaahịa anyị ga-enwerịrị ike ịnara ọnọdụ ndị a ma rụọ ọfụma n'agbanyeghị nsogbu ahụ. Yabụ, anyị ga-agba mbọ ọ bụla iji hụ na ngwaahịa anyị ga-eju afọ
Ọrụ ndị na-adịbeghị anya
Steepụ ìhè na naanị 12mm ọkpụrụkpụ -GL108
Site na usoro njikwa njikwa ogo dị elu na nke sayensị, ezigbo mma yana nkwenkwe mara mma, anyị merie aha ọma. N'otu oge ahụ, Eurborn na-ekwusi ike na ọhụụ na-aga n'ihu, ma na-ewebata ìhè a si na nke kachasị njọ ugbu a ...
Dị 4 nke ofdị Elu
1. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ihe ọchị, ọkụ ọkụ anaghị atọ ụtọ N'eziokwu, oriọna staircase nwere ike ịbụ otu ihe ahụ ọkụ ụzọ. Ọ bụ oriọna mbụ n'akụkọ ihe mere eme iji mee ihe dị ka ihe nkiri na-eche echiche, n'ihi na steepụ abalị ga-enwerịrị ọkụ, o ...